घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्तो हर्कत गर्छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! – Ujyaalo Patrika
हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ?
यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ–नयाँ कपडाहरु लगाउँछन् । त्यो उनीहरुको परीक्षण हो । एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज हुने टिभी शोहरु हेर्ने गर्छन् ।
एक्लो अवस्थामा केटीहरु ऐनाको अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहारलाई विभिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । कहिले मुख बिगार्छन् त कहिले हाँस्छन् । यस्तो गर्दा उनीहरु आनन्द महशुस गर्छन् ।
एक्लै भएको बेला केटीहरु प्रायस् कल्पनामै रमाउँछन् । यस्तो सोच्छन् कि आफूलाई केही ठूला पुरस्कार अर्थात महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल होस् ।
‘तपाईं सडकमा हिँड्दा कतै झुक्किएर कुकुरको गुहु छुनु भयो भने तुरुन्त हात धुन खोज्नु हुन्छ,’ टियर्नो भन्छन्, ‘बिछ्यौनाबारे पनि ठ्याक्कै त्यस्तै ठान्नुस्। तपाईंले आफ्नो बिछ्यौनामा के–के छ भनेर देख्ने मात्र भए (तर तपाईंले देख्नुहुन्न) तपाईं आफैं भन्नुहुन्थ्यो, के म यस्तो ठाउँमा सुत्न सक्छु र ?
Previous यी युवतीलाई ‘मृ’,त्युबारे पहिला नै जानकारी भएपछि यसरी गरिन् तयारी
Next ८ किलोमिटर हिडेर रोटीका लागि संघर्ष गर्थे नाना पाटेकर